အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ အာရေးဘီးယားရှိ ဘာသာတရား - ဝီကီပီးဒီးယား
အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ အာရေးဘီးယားရှိ ဘာသာတရား
(အာရေးဘီးယားဒဏ္ဍာရီ မှ ပြန်ညွှန်းထားသည်)
ယီမင်နိုင်ငံမှ ကျောက်ဖြူနုတစ်မျိုးဖြင့် ထုလုပ်ထားသော ကိုးကွယ်သောနတ်ရုပ်တုများ။ ယခုအခါ၌ ရောမမြို့၊ အရှေ့တိုင်းအနုပညာ အမျိုးသားပြတိုက်တွင် ရှိသည်။
အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ အာရေးဘီးယားရှိ ဘာသာတရား၌ ထိုဒေသရှိ မူလဇာတိနတ်များစွာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု အယူအဆများပါဝင်၍ ခရစ်ယာန်၊ ဂျူး၊ မန်ဒါအီးယ၊ အီရန်ဘာသာတရားများဖြစ်သော ဇိုရိုရက်စထရာဘာသာ၊ မစ်သရာဘာသာ၊ မန်နီခီးဘာသာ စသည်များလည်းပါဝင်သည်။ အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ အာရေးဘီးယား၌ လွှမ်းမိုးသော နတ်အများအပြားကိုးကွယ်သည့် အယူဝါဒသည် နတ်ဒေဝါများ၊ နတ်များကို ကိုးကွယ်ပူဇော်ခြင်းပေါ်တွင် အခြေခံသည်။ ထိုကိုးကွယ်ပူဇော်ကြသော နတ်များတွင် မက္ကာရှိ ကာ့ဘာအဆောက်အဦးကဲ့သို့သော ဒေသတွင်း နတ်ကွန်းများ၊ နတ်ကျောင်းဆောင်များ၌ ဟူးဘယ်လ်နှင့် နတ်သမီးများဖြစ်သည့် အာလတ်၊ အတ်လာစာ၊ မူနတ်တို့ပါဝင်သည်။ ဘုရားဖူးသွားခြင်း၊ ရှေ့ဖြစ်ဟောခြင်း၊ ယစ်ပူဇော်ခြင်းများအပါအဝင် ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်း အသွယ်သွယ်ဖြင့် နတ်ဒေဝါများကို ကိုးကွယ်ပူဇော် တိုင်တည်ကြသည်။ မက္ကာရှိဘာသာရေးတွင် အလ္လာဟ်၏ အခန်းကဏ္ဍနှင့်ပတ်သက်၍ များစွာသော သဘောတရားများကို အဆိုပြုခဲ့ကြသည်။ အစ္စလာမ်မတိုင်ခင် နတ်များ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖော်ပြချက်များကို ခြေရာကောက်ပါက အထူးသဖြင့် ကာ့ဘာအနီးနားရှိ ရုပ်တုများဖြစ်ကြပြီး ကာ့ဘာတွင် ရုပ်တုပေါင်း (၃၆၀) အထိရှိသည်ဟုဆိုကြသည်။
အခြားဘာသာရေးများတွင် များပြားသည့် နတ်(အငယ်)များကို တင်ဆက်ဖော်ပြထားသည်။ အနီးကပ်လျက် ရှိကြသော ရောမ၊ အားက်ဆန်၊ ဆန်ဆေးနီးယန်း အင်ပါယာတို့၏ လွှမ်းမိုးမှုများသည် အာရေးဗီးယားဒေသ၏ အနောက်မြောက်၊ အရှေ့မြောက်၊ တောင်အရပ်တို့တွင် ခရစ်ယာန်ဘာသာလူအသိုင်းအဝိုင်းများကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာသည် ထိုးဖောက်အကျိုးရောက်မှုနည်းပါးသော်လည်း ထိုကျွန်းဆွယ်ရှိ ကျန်ရှိသောအပိုင်းတွင် အချို့သော (ခရစ်ယာန်)ဘာသာကူးပြောင်းမှုများကို ခိုင်မာစေခဲ့သည်။ ပါရှန်းပင်လယ်ကွေ့နှင့် အရှေ့မြောက်အရပ်မှ နက်စတောရီးယန်းဘာသာ (Nestorianism- ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းခွဲတစ်ခု)မှလွဲ၍ ခရစ်ယာန်ဝါဒ၏ အလွှမ်းမိုးနိုင်ဆုံးပုံစံမှာ မိုင်ယာဖီဆိုက်ဝါဒ (Miaphysitism) ဖြစ်သည်။ ရောမခေတ်ကာလများမှစ၍ ဤကျွန်းဆွယ်သည် ဂျူးလူမျိုးများအတွက် ရွှေ့ပြောင်း အခြေချရာနေရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ထိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခြင်းများသည် အစ္စရေးနိုင်ငံပြင်ပ၌ ပျံ့နှံ့နေထိုင်ခြင်းများကို ဖြစ်ပေါ်လာစေကာ ဒေသတွင်း ဘာသာအယူပြောင်းလဲမှုများ ထပ်တိုးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ ထပ်မံ၍ ဆန်ဆေးနီးယန်းအင်ပါယာ၏ လွှမ်းမိုးခြင်းများကလည်း အီရန်ဘာသာတရားများကို ထိုကျွန်းဆွယ်၌ တည်ရှိနေစေခဲ့ရာ ဇိုရိုရက်စထရာဘာသာသည် အရှေ့နှင့် တောင်အရပ်၌ တည်ရှိခဲ့၍ တစ်ဖက်တွင် မက္ကာ၌ မန်နီခီးဘာသာ (Manichaeism) (သို့) ဖြစ်နိုင်သည့်နောက်ဘာသာတစ်ခုမှာ မက်ဇ်ဒက်ဘာသာ (Mazdakism) ကိုလိုက်နာကျင့်သုံးနိုင်စေခဲ့သည်။
၁ နောက်ခံအကြောင်းနှင့် ရင်းမြစ်များ
၂.၃ ရက်စက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ (မိစ္ဆာများ)
၂.၄ နတ်များ၏ အခန်းကဏ္ဍ
၂.၄.၁ အလ္လာ၏ အခန်းကဏ္ဍ
လေးရာစုခန့်အထိ အာရေးဘီးယားဒေသ၌နေထိုင်သူနီးပါးတိုင်းသည် နတ်များစွာကို ကိုးကွယ်သောအယူဝါဒကို ကျင့်သုံးခဲ့ကြသည်။ အရေးပါသော လူနည်းစု ဂျူးဘာသာ၊ ခရစ်ယာန်ဘာသာဝင်များ ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ကြသော်လည်း နတ်ကိုးကွယ်ခြင်းအယူဝါဒသည် အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်ခင်အထိ အာရေးဘီးယား၌ အဓိကဘာသာရေးအဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိခဲ့သည်။
အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်ခင် ဘာသာရေးနှင့် နတ်များနှင့်ပတ်သက်၍ အချက်လက် ခေတ်ပြိုင်ရင်းမြစ်များတွင် အနည်းငယ်သော ကျောက်စာများနှင့် ရုပ်တုများ အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ ကဗျာလင်္ကာများ၊ ဂျူး၊ ဂရိအကြောင်းများကဲ့သို့သော ပြင်ပရင်းမြစ်များ၊ ကိုရမ်ကျမ်း၊ အစ္စလာမ် အရေးသားများကဲ့သို့သော မူစလင်ရိုးရာအစဉ်လာများပါဝင်သည်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ သတင်းအချက်လက်များမှာ ကန့်သတ်နည်းပါးလှသည်။
အာရေးဘီးယား နတ်ကိုးကွယ်အယူဝါဒနင့်ပတ်သက်သော ထင်ရှားရှိသည့် အစောပိုင်းသက်သေတစ်ခုမှာ အတ္တာကွာရုမာ၊ ရူလ်ဒါ၊ နူဟာ၊ အတ္တာရှာမာယင် စသည့်နတ်များအကြောင်းဖော်ပြထားသော အက်စာဟာဒန်မှတ်တမ်း (Esarhaddon's Annals) ဖြစ်သည်။ ဂရိသမိုင်းပညာရှင် ဟစ်ရောဒထ(စ်)က ၎င်း၏ သမိုင်းမှတ်တမ်းများတွင် အာရပ်လူမျိုးများသည် အိုရိုတော့လ် ( ဂရိနတ်ဘုရား ဒိုင်ယာနိုင်းဆပ်စ် (Dionysus)) နှင့် အာလတ် (Al-Lat (Alilat)) (ဂရိနတ်ဘုရားမ အဲဖရာဒိုက်တီ (အက်ဖရာဒိုက်)) ကိုကိုးကွယ်ကြသည်ဟု ရေးသားခဲ့သည်။ ဂရိအတွေးခေါ်ပညာရှင်နှင့် သမိုင်းပညာရှင် စထရေးဘို (Strabo)က အာရပ်တို့သည် ဒိုင်ယာနိုင်းဆပ်စ် နှင့် ဇူးစ်နတ်ဘုရားကို ကိုးကွယ်သည်ဟု ဖော်ပြသည်။ ခရစ်ယာန်ဘာသာရေးပညာရှင် အောရီဂျာန်က ၎င်းတို့သည် ဒိုင်ယာနိုင်းဆပ်စ် နှင့် ယူရေးနီးယားနတ်သမီးကို ကိုးကွယ်သည်ဟု ဆိုသည်။
အာရေးဘီးယားနတ်ကိုးကွယ်မှုနှင့်ပတ်သက်၍ မူစလင်ရင်းမြစ်များတွင် Hisham ibn al-Kalbi ရေးသားသော ရှစ်ရာစု နတ်ရုပ်များ စာအုပ် (Book of Idols) ၊ ယီမင် သမိုင်းပညာရှင် al-Hasan al-Hamdani ၏ တောင်ပိုင်း အာရေးဘီးယား ဘာသာရေးယုံကြည်မှုများအကြောင်း စာပေများ ပါဝင်သည်။ နတ်ရုပ်တုများ စာအုပ်ကို ဖရန့်စစ် အက်ဝဒ် ပီတာစ်က အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်ခင် အာရေးဘီးယားဒေသ၏ ဘာသာရေးကျင့်ထုံးများနှင့်ပတ်သက်၍ အရေးကြီးဆုံးသော ဆွေးနွေး ကိုင်တွယ်ရမည့်အရာဟူ၍ ငြင်းခုံပြောဆိုသည်။
နတ်ရုပ်တုများ စာအုပ်အရ အေဘရာဟမ်၏သား အစ်ရှ်မေးယာ (Ishmael) မှဆင်းသက်လာသူများသည် မက္ကာမြို့တွင် အခြေချခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းအခြားဒေသများသို့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့ကြသည်။ ၎င်းတို့သည် ကာ့ဘာမှ မြင့်မြတ်သည့် ကျောက်တုံးများကို သယ်ဆောင်ယူသွားခဲ့ကြ၍ လှည့်လည်သွားလာရင်း ထိုကျောက်တုံးများကို ကာ့ဘာတွင်ကဲ့သို့ စိုက်ထူခဲ့ကြသည်။ အယ်လ်-ကာဘီ (al-Kalbi) ၏အဆိုအရ ဤအချက်သည် နတ်(များ)ကိုးကွယ်မှုကို ပေါ်ပေါက်လာစေခဲ့သည်။ ဤအချက်ကိုအခြေခံ၍ အာရပ်တို့သည် မူလက ကျောက်တုံးများကို ကိုးကွယ်ခဲ့ကာ နောက်ပိုင်းတွင် ပြင်ပနိုင်ငံများ၏ လွှမ်းမိုးမှုအောက်၌ နတ်ရုပ်တုများအား လက်ခံကိုးကွယ်ခဲ့ကြသည်မှာ ဖြစ်တန်ရာရှိသည်။ ၎င်း၏ ဖော်ပြချက်အဖြစ် နတ်နှင့် ကျောက်တုံးကြားက ဆက်နွယ်မှုကို တတိယရာစုလက်ရာဖြစ်သည့် ဆီးရီးယားဘာသာဖြင့် Pseudo-Meliton ဘာသာရေးဆိုင်ရာကျမ်းမှ နားလည်သဘောပေါက်နိုင်၍ ထိုစာအုပ်တွင် အယ်လ်-ကာဘီက မြောက်မက်ဆိုပိုတေးမီးယားရှိ ဆီးရီးယားဘာသာစကားပြောသူများ၏ ရိုးရာဘာသာယုံကြည်မှုများကို ဖော်ပြခဲ့သည်။ ထိုသူအများစုမှာ အာရပ်များဖြစ်ကြသည်။
ရှေးဟောင်း အာရပ်မျိုးနွယ်တစ်မျိုးဖြစ်သော နဲဘာတီးယန်တို့၏ (ဖြစ်နိုင်ချေရှိသည်မှာ) နတ်ဘုရားမ အက်လာဆာကို အကြမ်းသဘော ထွင်းထုထားခြင်း
အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ အာရေးဘီယား ဘာသာတရားများသည် ထင်ရှားသော နတ်များစွာကို ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုဖြစ်သည်။ သမားရိုးကျ ပုံမှန်ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်သော နတ်များစွာသည် မြို့ပြနိုင်ငံများအဆင့်မှသည် မျိုးနွယ်အုပ်စုများအထိ ရှိသော အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိသည့် တိုင်းပြည်များ၌ ပို၍ကျော်ကြားသည်။ မျိုးနွယ်စုများ၊ မြို့များ၊ မိသားစုကြီးများ အစရှိသည်တို့တွင် ဆိုင်ရာပိုင်ရာ ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှုများရှိကြသည်။ ခရစ်ရှန် ဂျူးလီယန် ရောဘင်က ဤအထွတ်အမြတ်ထားရာနယ်ပယ်လောက၏ ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံသည် ထိုခေတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းကို ရောင်ပြန်ဟပ်ညွှန်းဆိုနိုင်ခဲ့သည်ဟုဆိုသည်။
မြောက်များစွာသော နတ်များတွင် ဆိုင်ရာ အမည်များမရှိဘဲ ၎င်းတို့၏ ဂုဏ်ရည်၊ မိသားစုပတ်သက်မှု၊ စတင်ဖြစ်ပေါ်ရာဒေသအရှေ့မှ "...တဲ့ နတ်မင်း/သား" (သို့) "...တဲ့ နတ်သမီး" (he who or she who) စသဖြင့် အသီးသီးမှည့်ခေါ်ကြသည်။
ခြေဦးတည့်ရာလှည့်လည်သွာလာနေကြသော ဘဒ်ဒွတ်ယင် အာရပ်မျိုးနွယ်တစ်စု၏ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်နှင့် အလေ့အထများသည် မက္ကာကဲ့သို့သော မျိုးနွယ်စုအခြေချရာ မြို့များ၏ ယုံကြည်မှု၊ ကျင့်ထုံးများနှင့် သိသာကွာခြားသည်။ ထိုသိုခြေဦးတည့်ရာလှည့်လည်နေထိုင်တတ်သူများ၏ ဘာသာရေးယုံကြည်ချက်နှင့် အလေ့အထများ၌ တစ်ခုခုတွင် နတ်ဝင်သည်ဟူသောအယူအဆဖြင့် ကိုးကွယ်ခြင်း(fetishism)၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်၏ ရုပ်တု (သို့) သဘာဝအရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို ပူဇော်ပသခြင်း (totemism)၊ သေလွန်ပြီးသူများကို ပူဇော်ပသခြင်းများပါဝင်သည်။ သို့သော် သေလွန်ပြီး တမလွန်နှင့်ပတ်သက်သော ဒဿနပိုင်းဆိုင်ရာ မေးခွန်းများအား များများစားစားစဉ်းစားခြင်း မရှိဘဲ ၎င်းတို၏ကိုးကွယ်ယုံကြည်မှု၌ လတ်တလော စိုးရိမ်ပူပန်မှု၊ ပြဿနာများကိုသာ အဓိကအားဖြင့် အလေးထားကြသည်။ အခြားတစ်ဖက်တွင်မူ မြို့ပြအခြေချနေထိုင်သာအာရပ်များ၌ ပို၍ရှုပ်ထွေးသော နတ်များကိုးကွယ်သည့် ယုံကြည်မှုရှိသည်ဟု ယူဆနိုင်သည်။ မက္ကာနှင့် ဟစ်ဂျဲဇ်မြို့တို့၌ နေထိုင်သူများသည် မြို့များ၊ ရေပူဆန်းများတွင် အခိုင်အခန့်ရှိသော နတ်ကွန်များတွင် နတ်များကို ကိုးကွယ်ပူဇော်ကြ၍ ဘဒ်ဒွတ်ယင်မျိုးမှာ ၎င်းတို့၏ဘာသာရေးကို လှည့်လည်သွားလာကြရင်း ကျင့်သုံးကြသည်။
​အာရေးဘီးယားတောင်ပိုင်းတွင် mndh’t သည် ထိုလူ့အဖွဲ့အစည်း၏ အမည်မသိ နတ်(ဝိဉာဉ်)များဖြစ်ကာ မိသားစုရှေးဘိုးဘေးများလည်းဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့ကို မိသားစုဘိုးဘေးများ၏ နေမင်းများ (shms) ဟူ၍ အသိများသည်။ မြောက်အာရေးဘီးယား၌ ginnaye များကို ပါးလ်မိုင်ယာမြို့ ကျောက်စာထွင်းထုမှုများမှ ကောင်းသောနတ်များ၊ ဆုလာဒ်ပေးသောနတ်များအဖြစ် သိရှိကြရကာ အာရေးဘီးယား အလယ်ပိုင်း၊ အနောက်ပိုင်းရှိ ဂျင် (သို့) ဂျီးန်နီ နတ်ဝိဉာဉ်များနှင့် ပတ်သက်နိုင်ခြေရှိသည်။ ဂျင်များနှင့်မတူဘဲ ginnaye များသည် လူသားများအား အန္တရာယ်မပေး၊ ဝင်ပူးကပ်ခြင်းမရှိဘဲ ရောမဘာသာတရားမှ အစောင့်နတ်များနှင့် ပို၍ ခပ်ဆင်ဆင်တူညီသည်။ အာရေးဘီးယား ယုံကြည်မှုများအရ အနာဂတ်ဟောသူများ၊ အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ ဒဿနပညာရှင်များ၊ ကဗျာဆရာများကို ဂျင် များက စေ့ဆော်ပေးနိုင်သည်ဟုဆိုသည်။ သို့ရာတွင် ဂျင်များကို ကြောက်ရွံ့ကြကာ ၎င်းတို့သည် အမျိုးမျိုးသော ရောဂါများ၊ စိတ်ရောဂါများကို ဖြစ်စေတတ်သည့် အစွမ်းရှိသည်ဟုလည်း ယုံကြည်ကြသည်။
ရက်စက်သော ပုဂ္ဂိုလ်များ (မိစ္ဆာများ)[ပြင်ဆင်ရန်]
ကြင်နာတတ်သော နတ်များ၊ ဝိဉာဉ်လောကသားများအပြင် မကောင်းသော၊ ရက်စက်တတ်သော ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းရှိကြသည်။ ထိုပုဂ္ဂိုလ်များသည် ရှေးဟောင်းကျောက်စာထွင်းထုမှု မှတ်တမ်းများ၌ ပါဝင်ခြင်းမရှိသော်လည်း အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်ခင်က ကဗျာလင်္ကာများ၌ ခိုင်းနှိုင်းမှုသဘောတွေ့ရကာ ၎င်းတို့၏ ရာဇဝင်ပုံပြင်များကို နောက်ပိုင်း မူစလင်စာရေးဆရာများက ပြုစု စုဆောင်းခဲ့သည်။
အဓိကဖော်ပြထားသည်မှာ မကောင်းသည့်သရဲတစ္ဆေ ဂူးလ် (ghoul) များဖြစ်သည်။ အင်္ဂလိပ်စကားလုံး ghoul သည် အာရပ်၏ ghala (ဖမ်းဆုပ်ခြင်း)၊ ထိုမှတဆင့် ghul၊ ဤ ghul စကားလုံးမှ ဆင်းသက်လာခဲ့ကာ ဆူမားရီးယားတို့၏ gallu နှင့်ဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ထိုဂူးလ်များ၌ ပုန်းဝှက်တတ်သော အသွင်ရှိ၍ မြည်းကဲ့သို့သော ခြေထောက်များရှိသည်။ အာရပ်များသည် ထိုဂူးလ်ကို တွေ့ကြုံဆုံမိပါက ဤသို့ (စာလုံးရေညီ၊ ကာရန်တူ)ကဗျာပါဒကို ရွတ်ဆိုကြလေသည်။ "အို... အမောင် မြည်းခြေထောက်ရှင်, ခပ်ဝေးဝေးမှာ သွား၍ သွား၍ ဟီလိုက်ပါ၊
တို့များမောင် ကန္တာရလွင်ပြင်, ဘယ်အဝေးမှ မသွား မသွား လိုကြပါ။"
ခရစ်ရှန် ဂျူးလီယန် ရောဘင်က သိရှိသမျှသော တောင်အာရေးဘီးယားနတ်အပေါင်းသည် ကောင်းမှုသဘောဆောင်ကာ ကာကွယ်တတ်သည်။ မိစ္ဆာနတ်ဆိုးများမှာ တင်စားချက်သာရှိ၍ ပုဂ္ဂိုလ်ရေး ခိုင်းနှုင်းတင်စားခြင်းမရှိခဲ့ပေ ဟူ၍ မှတ်ချက်ပြုသည်။
အချို့သော ပညာရှင်များက ဆွေးနွေးသုံးသပ်ရာ၌ အခြေခံဖြစ်မည့် အဆိုတစ်ခုကိုပေးကြသည်။ ထိုအဆိုမှာ မက္ကာမြို့အပါအဝင် အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ အာရေးဘီးယား၌ အလ္လာကို နတ်တစ်ပါး၊ ဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်မှာ ဖန်ဆင်းခြင်းကိုပြုသော နတ်ဘုရား (သို့) နတ်ဘုရားတို့၏ အချုပ် အဖြစ် နတ်များစွာကိုးကွယ်သော ဘာသာတရား၌ ဤသို့ယူဆကြသည်။ အလ္လာ (Allah) စကားလုံးသည် အာရေးဗျစကားလုံး al-ilah မှဖြစ်၍ နတ်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရသည်။ အမည်နာမထက် ဂုဏ်သဘောအဖြစ် တင်စားသုံးစွဲခြင်းရှိနိုင်ခဲ့သည်။ အလ္လာနှင့်ပတ်သက်သောအယူအဆသည် မက္ကာဘာသာရေး၌ ထင်ရှားသဲကွဲခြင်းမရှိနိုင်ခဲ့ပေ။ အစ္စလာမ်ရင်းမြစ်များအရ မက္ကာမြို့သားများနှင့် ၎င်းတို့၏မြို့နီးချုပ်စပ်မှသူများသည် နတ်သမီး အာလတ် (Al-lāt)၊ အတ်လာဆာ (Al-‘Uzzá)၊ မန်နတ် (Manāt)တို့သည် အလ္လာ၏ သမီးများဟုယုံကြည်ကြသည်။
အလ္လာ စကားလုံး၏ ဒေသသုံးမူကွဲများကို ရိုးရာဘာသာတရားနှင့် အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ ခရစ်ယာန် ကျောက်စာများ၌ တွေ့ရသည်။ တမန်တော် မိုဟာမက်မတိုင်ခင် မျိုးဆက်တစ်ခု၌ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော အာရပ်ကဗျာဆရာ Zuhayr bin Abi Sulma ၏ကဗျာများနှင့် အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ လူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုင်ရာ အမည်များတွင် အလ္လာနှင့်ပတ်သက်သော ကိုးကားထောက်ထားများကို တွေ့နိုင်သည်။ မိုဟာမက်၏ ဖခင်အမည်မှာ Abdullah ibn Abdul-Muttalib (သို့) ʿAbd-Allāh ဖြစ်ကာ အနက်မှာ အလ္လာ၏ အစေခံ ဖြစ်သည်။
ချားလ်စ် ရဆဲလ် ကိုးလ်တာနှင့် ပက်ထရစ်ရှာ တားန်နာတို့က စဉ်းစားယူဆသည်မှာ အလ္လာ၏အမည်သည် အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်ခင် နတ်တစ်ပါးဖြစ်သော Ailiah မှဆင်းသက်လာနိုင်ပြီး El ၊ Il ၊ Ilah နှင့် ဂျစ်ဟိုးဗား (ယေဟောဝါ) တို့နှင့်ဆင်တူနိုင်သည်ဟူ၍ဖြစ်သည်။ ၎င်း၏ ဂုဏ်အရည်အချင်းအချို့သည် လနတ်သား/သမီးများဖြစ်သော Almaqah ၊ Kahl ၊ Shaker ၊ Wadd နှင့် Warakh တို့အပေါ် အခြေခံသည့်ဟန်ဖြစ်ကြောင်းလည်း တွေးမြင်ယူဆကြသည်။ Alfred Guillaume က စကားလုံး အလ္လာ ဖြစ်လာခဲ့သော အီလာ (Ilah) နှင့် ရှေးဟောင်း ဘာဘီလုံစကားလုံး အီလ် (Il) သို့ ရှေးဟောင်း အစ္စရေးတို့၏ အယ်လ် (El) တို့အကြား ဆက်စပ်ချက်သည် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း မရှိဟု ဆိုသည်။ Wellhausen က အလ္လာကို ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်ရင်းမြစ်များမှတစ်ဆင့် သိရှိခဲ့၍ ထိုအမည်သည် အာရပ်ရိုးရာဘာသာတွင် နတ်တို့၏ အချုပ်အဖြစ် သိရှိလာခဲ့ကြသည်ဟု ပြောကြားသည်။ Winfried Corduan က အစ္စလာမ်တို့၏ အလ္လာနှင့် လနတ်ဘုရားတို့၏ ဆက်နွယ်မှုကို သံသယရှိ၍ အလ္လာ ဝေါဟာရသည် စင်နတ်မင်း (Sin) အတွက် ခေါင်းစဉ်အဖြစ်သုံးသော El-Elyon ဝေါဟာရကဲ့သို့ ယေဘူယျအမည်(ဝေါဟာရ)တစ်ခုသာဖြစ်ကြောင်း ဆိုသည်။
ကောင်းကင်နှင့် မြေကြီးတို့၏ အရှင်အဖြစ် မဟာဂရုဏာရှင် ရာမန် (ရာမန်နန်)(Rahman) ဟုခေါ်သော တစ်ဆူတည်းသော ယုံကြည်မှုရှိသည့် ဘုရားကို စတုတ္ထရာစုမှ တောင်အာရေးဘီးယားကျောက်စာများက ရည်ညွှန်းကိုးကားဖော်ပြသည်။ အဲရန် ဒဗလျူ ဟျူးချ်စ်က အလ္လာသည် ရှေးခေတ်နတ်များစွာကိုးကွယ်သော ဝါဒစနစ် သို့ ဂျူး၊ ခရစ်ယာန်လူမှုအသိုင်းဝိုင်းများ၏ လွှမ်းမိုးနိုင်စွမ်းရှိခြင်းတို့ကြောင့်မှ ဖြစ်ပေါ်လာခြင်း ဖြစ်ပေါ်မလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်၍ ပညာရှင်များမှာ သဲသဲကွဲကွဲမသိရှိဟုဆို၍ အလ္လာနှင့် ရာမန်ကို ဆက်စပ်ဖော်ပြရန်လည်း ခက်ခဲသည်ဟုဆိုသည်။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ Maxime Rodinson က အလ္လာ၏အမည်များထဲက အာရ်ရာမန် (Ar-Rahman) ကို အစောပိုင်းတွင် ရာမန်နန်ပုံစံအဖြစ် အသုံးပြုခဲ့ကြကြောင်း ယူဆသည်။
ဖရန့်စစ် အဒ်ဝပ် ပီတာစ်အရ အာရပ်ရိုးရာဘာသာတရား၏ လက္ခဏာများအနက်တစ်ခုသည် နတ်ဘုရားများ၊ နတ်များ၏ မူလဇာစ်မြစ် သမိုင်းကြောင်းကို ရှင်းပြပေးနိုင်မည့် ရိုးရာစဉ်ဆက်ဇာတ်လမ်းများဖြစ်သည့် ဒဏ္ဍာရီမဲ့နေခြင်းဖြစ်သည်ဟု ဆိုသည်။ များစွာသော နတ်ဒေဝါများတွင် ဂုဏ်ပုဒ်များရှိသော်လည်း ထိုဂုဏ်ပုဒ်များကို အနက်ကောက်ရန် ဇာတ်လမ်းပုံပြင်များ၊ ဒဏ္ဍာရီများ မရှိချေ။ ထို့ကြောင့် ၎င်းတို့အကြောင်းကို ယေဘူယျသဘောမျှ ဖော်ပြရန်မစွမ်းသာချေ။
↑ ၁.၀ ၁.၁ Hoyland 2002, p. 139.
↑ ၂.၀ ၂.၁ Berkey 2003, p. 42.
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ Nicolle 2012, p. 19.
↑ Doniger 1999, p. 70.
↑ Mouton & Schmid 2014, p. 338.
↑ ၆.၀ ၆.၁ Teixidor 2015, p. 70.
↑ Robin, Christian Julien, "South Arabia, Religions in Pre-Islamic", in McAuliffe 2005, pp. 92
↑ Peters 1994a, p. 6.
↑ ၉.၀ ၉.၁ ၉.၂ ၉.၃ Teixidor 2015, p. 73-74.
↑ ၁၀.၀ ၁၀.၁ ၁၀.၂ ၁၀.၃ Robin, Christian Julien, "South Arabia, Religions in Pre-Islamic", in McAuliffe 2005, pp. 87
↑ ၁၁.၀ ၁၁.၁ ၁၁.၂ Aslan 2008, p. 6.
↑ Peters 1994b, p. 105.
↑ ၁၃.၀ ၁၃.၁ Hoyland 2002, p. 144.
↑ ၁၄.၀ ၁၄.၁ ၁၄.၂ ၁၄.၃ ၁၄.၄ ၁၄.၅ Hoyland 2002, p. 145.
↑ Teixidor 1979, p. 77.
↑ El-Zein 2009, p. 34.
↑ El-Zein 2009, p. 122.
↑ Lebling 2010, p. 96.
↑ Cramer 1979, p. 104.
↑ Robin, Christian Julien, "South Arabia, Religions in Pre-Islamic", in McAuliffe 2005, pp. 88
↑ Campo 2009, p. 34.
↑ Peters 1994b, p. 107.
↑ ၂၃.၀ ၂၃.၁ Robinson 2013, p. 75.
↑ ၂၄.၀ ၂၄.၁ Peters 1994b, p. 110.
↑ ၂၆.၀ ၂၆.၁ Böwering, Gerhard, "God and his Attributes", in McAuliffe 2005
↑ Peterson 2007, p. 46.
↑ Hitti 1970, p. 100-101.
↑ Phipps 1999, p. 21.
↑ Coulter & Turner 2013, p. 37.
↑ Guillaume 1963, p. 7.
↑ Corduan 2013, p. 112, 113.
↑ ၃၄.၀ ၃၄.၁ Hughes 2013, p. 25.
↑ Rodinson 2002, p. 119.
↑ Peters 2003, p. 45.
↑ Hoyland 2002, p. 140.
Armstrong၊ Karen (2000)၊ Islam: A Short History၊ Modern Library၊ ISBN 978-0-8129-6618-3 CS1 maint: ref=harv (link)
Aslan၊ Reza (2008)၊ No God But God: The Origins, Evolution and Future of Islam၊ Random House၊ ISBN 978-1-4070-0928-5 CS1 maint: ref=harv (link)
al-Azmeh၊ Aziz (2017)၊ The Emergence of Islam in Late Antiquity: Allah and His People၊ Cambridge University Press၊ ISBN 978-1-316-64155-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Ball၊ Warwick (2002)၊ Rome in the East: The Transformation of an Empire၊ Routledge၊ ISBN 978-1-134-82387-1 CS1 maint: ref=harv (link)
Berkey၊ Jonathan Porter (2003)၊ The Formation of Islam: Religion and Society in the Near East, 600-1800၊ Cambridge University Press၊ ISBN 978-0-521-58813-3 CS1 maint: ref=harv (link)
Bernabé၊ Alberto; Jáuregui၊ Miguel Herrero de; Cristóbal၊ Ana Isabel Jiménez San; Hernández၊ Raquel Martín, eds. (2013)၊ Redefining Dionysos၊ Walter de Gruyter၊ ISBN 978-3-11-030132-8 CS1 maint: ref=harv (link)
Cameron၊ Averil (2002)၊ The Mediterranean World in Late Antiquity၊ Routledge၊ ISBN 978-1-134-98081-9 CS1 maint: ref=harv (link)
Carmody၊ Denise Lardner; Carmody၊ John Tully (2015)၊ In the Path of the Masters: Understanding the Spirituality of Buddha, Confucius, Jesus, and Muhammad: Understanding the Spirituality of Buddha, Confucius, Jesus, and Muhammad၊ Routledge၊ ISBN 978-1-317-46820-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Chancey၊ Mark A. (2002)၊ The Myth ofaGentile Galilee၊ Cambridge University Press၊ ISBN 978-1-139-43465-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Corduan၊ Winfried (2013)၊ Neighboring Faiths: A Christian Introduction to World Religions၊ InterVarsity Press၊ ISBN 978-0-8308-7197-1 CS1 maint: ref=harv (link)
Coulter၊ Charles Russell; Turner၊ Patricia (2013)၊ Encyclopedia of Ancient Deities၊ Routledge၊ ISBN 978-1-135-96390-3 CS1 maint: ref=harv (link)
Cramer၊ Marc (1979)၊ The Devil Within၊ University of Michigan၊ ISBN 978-0-491-02366-5 CS1 maint: ref=harv (link)
Crawford၊ Harriet E. W. (1998)၊ Dilmun and Its Gulf Neighbours၊ Cambridge University Press၊ ISBN 978-0-521-58679-5 CS1 maint: ref=harv (link)
Crone၊ Patricia (2005)၊ Medieval Islamic Political Thought၊ Edinburgh University Press၊ ISBN 978-0-7486-2194-1 CS1 maint: ref=harv (link)
El-Zein၊ Amira (2009)၊ Islam, Arabs, and Intelligent World of the Jinn၊ Syracuse University Press၊ ISBN 978-0-8156-3200-9 CS1 maint: ref=harv (link)
Doniger၊ Wendy (1999)၊ Merriam-Webster's Encyclopedia of World Religions၊ Merriam-Webster၊ ISBN 978-0-87779-044-0 CS1 maint: ref=harv (link)
Drijvers၊ H. J. W (1976)။ van Baaren၊ Theodoor Pieter; Leertouwer၊ Lammert; Leemhuis၊ Fred; Buning၊ H. (eds.)။ The Religion of Palmyra။ Brill။ ISBN 978-0-585-36013-3။ CS1 maint: ref=harv (link)
Drijvers၊ H. J. W. (1980)၊ Cults and Beliefs at Edessa၊ Brill Archive၊ ISBN 978-90-04-06050-0 CS1 maint: ref=harv (link)
Eliade၊ Mircea (2013)၊ History of Religious Ideas, Volume 3: From Muhammad to the Age of Reforms၊ University of Chicago Press၊ ISBN 978-0-226-14772-7 CS1 maint: ref=harv (link)
Esposito၊ John (1999)၊ The Oxford History of Islam၊ Oxford University Press၊ ISBN 978-0-19-510799-9 CS1 maint: ref=harv (link)
Fahd၊ T. (2012)။ "Manaf"။ in P. Bearman; Th. Bianquis; C.E. Bosworth; E. van Donzel; W.P. Heinrichs (eds.)။ Encyclopaedia of Islam (2nd ed.)။ Brill။ doi:10.1163/1573-3912_islam_SIM_4901။
Fisher၊ Greg (2015)၊ Arabs and Empires before Islam၊ OUP Oxford၊ ISBN 978-0-19-105699-4 CS1 maint: ref=harv (link)
Frank၊ Richard M.; Montgomery၊ James Edward (2007)၊ Arabic Theology, Arabic Philosophy: From the Many to the One၊ Peeters Publishers၊ ISBN 978-90-429-1778-1 CS1 maint: ref=harv (link)
Gelder၊ G. J. H. van (2005)၊ Close Relationships: Incest and Inbreeding in Classical Arabic Literature၊ I. B. Tauris၊ ISBN 978-1-85043-855-7 CS1 maint: ref=harv (link)
Gilbert၊ Martin (2010)၊ In Ishmael's House: A History of Jews in Muslim Lands၊ McClelland & Stewart၊ ISBN 978-1-55199-342-3 CS1 maint: ref=harv (link)
Gilman၊ Ian; Klimkeit၊ Hans-Joachim (2013)၊ Christians in Asia before 1500၊ Routledge၊ ISBN 978-1-136-10978-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Goddard၊ Hugh (2000)၊ A History of Christian-Muslim Relations၊ Rowman & Littlefield၊ ISBN 978-1-56663-340-6 CS1 maint: ref=harv (link)
Guillaume၊ Alfred (1963)၊ Islam၊ Cassell
Hawting၊ G. R. (1999)၊ The Idea of Idolatry and the Emergence of Islam: From Polemic to History၊ Cambridge University Press၊ ISBN 978-1-139-42635-0 CS1 maint: ref=harv (link)
Healey၊ John F. (2001)၊ The Religion of the Nabataeans: A Conspectus၊ Brill၊ ISBN 978-90-04-10754-0 CS1 maint: ref=harv (link)
Healey၊ John F.; Porter၊ Venetia (2003)၊ Studies on Arabia in Honour of G. Felix၊ Oxford University Press၊ ISBN 978-0-19-851064-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Holes၊ Clive (2001)၊ Dialect, Culture, and Society in Eastern Arabia: Glossary၊ Brill၊ ISBN 978-90-04-10763-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Houtsma၊ Martijn Theodoor, ed. (1993)၊ E.J. Brill's First Encyclopaedia of Islam, 1913-1936, Volume 5၊ Brill၊ ISBN 978-90-04-09791-9 CS1 maint: ref=harv (link)
Hoyland၊ Robert G. (2002)၊ Arabia and the Arabs: From the Bronze Age to the Coming of Islam၊ Routledge၊ ISBN 978-1-134-64634-0 CS1 maint: ref=harv (link)
Hughes၊ Aaron W. (2013)၊ Muslim Identities: An Introduction to Islam၊ Columbia University Press၊ ISBN 978-0-231-53192-4 CS1 maint: ref=harv (link)
Humphreys၊ R. Stephen (1991)၊ Islamic History: A Framework for Inquiry၊ Princeton University Press၊ ISBN 978-1-85043-360-6 CS1 maint: ref=harv (link)
Johnson၊ Scott Fitzgerald (2012)၊ The Oxford Handbook of Late Antiquity၊ OUP USA၊ ISBN 978-0-19-533693-1 CS1 maint: ref=harv (link)
Kaizer၊ Ted (2008)၊ The Variety of Local Religious Life in the Near East: In the Hellenistic and Roman Periods၊ Brill၊ ISBN 978-90-04-16735-3 CS1 maint: ref=harv (link)
al-Kalbi၊ Ibn (2015)၊ Book of Idols၊ ဘာသာပြန်သူ Faris၊ Nabih Amin၊ Princeton University Press၊ ISBN 978-1-4008-7679-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Korotaev၊ A. V. (1996)၊ Pre-Islamic Yemen: Socio-political Organization of the Sabaean Cultural Area in the 2nd and 3rd Centuries AD၊ Otto Harrassowitz Verlag၊ ISBN 978-3-447-03679-5 CS1 maint: ref=harv (link)
Kozah၊ Mario; Abu-Husayn၊ Abdulrahim (2014)၊ The Syriac Writers of Qatar in the Seventh Century၊ Gorgias Press, LLC၊ ISBN 978-1-4632-0355-9 CS1 maint: ref=harv (link)
Lambton၊ Ann K. S.; Lewis၊ Bernard (1977)၊ The Cambridge History of Islam: Volume 1A၊ Cambridge University Press၊ ISBN 978-0-521-29135-4 CS1 maint: ref=harv (link)
Lindsay၊ James E. (2005)၊ Daily Life in the Medieval Islamic World၊ Greenwood Publishing Group၊ ISBN 978-0-313-32270-9 CS1 maint: ref=harv (link)
Lurker၊ Manfred (2015)၊ A Dictionary of Gods and Goddesses, Devils and Demons၊ Routledge၊ ISBN 978-1-136-10628-6 CS1 maint: ref=harv (link)
Lecker၊ Michael (1998)၊ Jews and Arabs in Pre- and Early Islamic Arabia၊ Ashgate၊ ISBN 978-0-86078-784-6 CS1 maint: ref=harv (link)
Leeming၊ David (2004)၊ Jealous Gods and Chosen People: The Mythology of the Middle East၊ Oxford University Press၊ ISBN 978-0-19-534899-6 CS1 maint: ref=harv (link)
McAuliffe၊ Jane Dammen (2005)၊ Encyclopaedia of the Qurʼān, Volume 5၊ Brill၊ ISBN 978-90-04-12356-4 CS1 maint: ref=harv (link)
McLaughlin၊ John L. (2012)၊ The Ancient Near East၊ Abingdon Press၊ ISBN 978-1-4267-6550-6 CS1 maint: ref=harv (link)
Mouton၊ Michel; Schmid၊ Stephan G. (2014)၊ Men on the Rocks: The Formation of Nabataean Petra၊ Logos Verlag Berlin GmbH၊ ISBN 978-3-8325-3313-7 CS1 maint: ref=harv (link)
Neusner၊ Jacob (2006)၊ Jeremiah in Talmud and Midrash: A Source Book၊ University Press of America၊ ISBN 978-0-7618-3487-8 CS1 maint: ref=harv (link)
Nicolle၊ David (2012)၊ The Great Islamic Conquests AD 632-750၊ Osprey Publishing၊ ISBN 978-1-78096-998-5 CS1 maint: ref=harv (link)
Peters၊ Francis E. (1994a)၊ Mecca: A Literary History of the Muslim Holy Land၊ Princeton University Press၊ ISBN 978-0-691-03267-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Peters၊ Francis E. (1994b)၊ Muhammad and the Origins of Islam၊ SUNY Press၊ ISBN 978-0-7914-1875-8 CS1 maint: ref=harv (link)
Peters၊ Francis E. (2003)၊ Islam,aGuide for Jews and Christians၊ Princeton University Press၊ ISBN 978-0-691-11553-5 CS1 maint: ref=harv (link)
Peterson၊ Daniel C. (2007)၊ Muhammad, Prophet of God၊ Wm. B. Eerdmans Publishing၊ ISBN 978-0-8028-0754-0 CS1 maint: ref=harv (link)
Phipps၊ William E. (1999)၊ Muhammad and Jesus: A Comparison of the Prophets and Their Teachings၊ A&C Black၊ ISBN 978-0-8264-1207-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Robinson၊ Neal (2013)၊ Islam: A Concise Introduction၊ Routledge၊ ISBN 978-1-136-81773-1 CS1 maint: ref=harv (link)
Rodinson၊ Maxime (2002)၊ Muhammad: Prophet of Islam၊ Tauris Parke Paperbacks၊ ISBN 978-1-86064-827-4 CS1 maint: ref=harv (link)
al-Sa'ud၊ 'Abd Allah Sa'ud (2011)၊ Central Arabia During the Early Hellenistic Period၊ King Fahd National Library၊ ISBN 978-9-960-00097-8 CS1 maint: ref=harv (link)
Sartre၊ Maurice (2005)၊ The Middle East Under Rome၊ Harvard University Press၊ ISBN 978-0-674-01683-5 CS1 maint: ref=harv (link)
Shahid၊ Irfan (1995)၊ Byzantium and the Arabs in the Sixth Century၊ Dumbarton Oaks၊ ISBN 978-0-88402-284-8 CS1 maint: ref=harv (link)
Sirry၊ Mun'im (2014)၊ Scriptural Polemics: The Qur'an and Other Religions၊ Oxford University Press၊ ISBN 978-0-19-935937-0 CS1 maint: ref=harv (link)
Smart၊ J. R. (1996)၊ Tradition and Modernity in Arabic Language and Literature၊ Psychology Press၊ ISBN 978-0-7007-0411-8 CS1 maint: ref=harv (link)
Stefon၊ Matt (2009)၊ Islamic Beliefs and Practices၊ The Rosen Publishing Group, Inc.၊ ISBN 978-1-61530-017-4 CS1 maint: ref=harv (link)
Sykes၊ Egerton (2014)၊ Who's Who in Non-Classical Mythology၊ Routledge၊ ISBN 978-1-136-41437-4 CS1 maint: ref=harv (link)
Tabari၊ Al (1990)၊ The Last Years of the Prophet၊ ဘာသာပြန်သူ Husayn၊ Isma'il Qurban၊ State University of New York Press၊ ISBN 978-0-88706-691-7 CS1 maint: ref=harv (link)
Taylor၊ Jane (2001)၊ Petra and the Lost Kingdom of the Nabataeans၊ I. B. Tauris၊ ISBN 978-1-86064-508-2 CS1 maint: ref=harv (link)
Teixidor၊ Javier (1979)၊ The Pantheon of Palmyra၊ Brill Archive၊ ISBN 978-90-04-05987-0 CS1 maint: ref=harv (link)
Teixidor၊ Javier (2015)၊ The Pagan God: Popular Religion in the Greco-Roman Near East၊ Princeton University Press၊ ISBN 978-1-4008-7139-1 CS1 maint: ref=harv (link)
Watt၊ W. Montgomery (1956)၊ Muhammad At Medina၊ Oxford At The Clarendon Press၊ p. 318
Wheatley၊ Paul (2001)၊ The Places Where Men Pray Together: Cities in Islamic Lands, Seventh Through the Tenth Centuries၊ University of Chicago Press၊ ISBN 978-0-226-89428-7 CS1 maint: ref=harv (link)
Zeitlin၊ Irving M. (2007)၊ The Historical Muhammad၊ Polity၊ ISBN 978-0-7456-3999-4 CS1 maint: ref=harv (link)
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=အစ္စလာမ်ခေတ်မတိုင်မီ_အာရေးဘီးယားရှိ_ဘာသာတရား&oldid=698318" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၄ အောက်တိုဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၇:၃၀ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။